Fanamboarana emb emb Computer Computer Computer Computer → Computer Computer Computer emb emb Computer Computer Computer
Betsaka ny fomba fanaingoana, ny teknika vaovao dia mety hampifangaro olona maro rehefa miatrika ny safidiny. Ny fanapahan-kevitra momba ny karazana marika dia miankina amin'ny lafin-javatra maro. Ny famaritana ny tanjon'ny akanjo na lamba ho an'ny fanontana dia mety hanampy antsika hisafidy teknika manokana. Na inona na inona fomba fanamarihana izay safidinao, ny stitching embroidery dia mijanona ho fomba mendrika indrindra.
Ny fomba fanaingoana tranainy indrindra
amboradara Fantatra nandritra ny an'arivony taona maro noho ny endrika manerantany, dia mijanona ho manan-danja hatrany izy io. Vokatr'izany, ny lamba amboradara dia mijery kanto tokoa ary manome antoka fiainana lava kokoa noho ny lamba voaravaka teknika hafa.
Cap miaraka amin'ny sary vita amin'ny amboradara solosaina
Haingo ho an'ny fotoana rehetra
Our mafy fifanarahana amin'ny fanaovana maharitra sy mahomby ravaka amin'ny akanjo fiasana sy dokam-barotra, ary koa lamba fandraisam-bahiny sy fikarakarana sakafo. Manana ny toeran'ny masininay manokana izahay, ahafahanay manome antoka ny vidin'ny fifaninanana sy ny fotoana fohy amin'ny fandefasana.
Miezaka mafy izahay mamita ny baiko tsirairay. Ny ekipanay dia ho faly hanampy anao hisafidy vokatra sy ny fomba fanaingoana. Manolotra serivisy fanangonana akanjo ihany koa izahay.
famonoana amboradain'ny solosaina mitaky ny fividianana programa fanaovana amboradara. Ity fomba ity dia atolotra ho an'ny haben'ny sary kely kokoa. Raha vantany vao novidiana ny programa fanaovana amboradara dia mitoetra ao anaty kaontinay ho an'ny tsara izany, ka rehefa miverina aminay miaraka amina baiko hafa ianao dia tsy ho voaloa ianao amin'ny fanomanana programa mitovy amin'izany fanindroany. Izy io dia endrika haingo kanto sy tsy manam-potoana.
Tena voa mafy ho an'ireo mametraka ny faharetana amin'ny toerana voalohany. nasongadina nanana na dia taona maro taty aoriana dia toa mahatalanjona izany. Izany dia hanome fahafaham-po ireo izay miahy ny sarin'ny orinasany. Ity karazana pirinty ity dia atolotra ihany koa ho an'ny akanjo fanasan-damba matetika izay mihatra amin'ireo mpiasan-damba matanjaka.
Ny fizotry ny fampiharana ny amboradara amin'ny solosaina
Fanoratana efijery dia teknikan'ny haingo izay ny endrika fanontana dia maodely ampiharina amin'ny harato matevina. Ny harato dia azo vita amin'ny vy na fibre synthetic. Ny fanaovana kopia dia ahodina amin'ny loko. Ny fanaovana fanontana amin'ny efijery dia misy ny fividianana matrix ho an'ny fanontana.
Ity dia vahaolana tena tsara rehefa te-hahazo ny vokatry ny loko mangatsiaka mandritra ny fihazonana marina sy fanoherana ny abrasion. Ny tetik'asa vita dia hijery matanjaka mandritra ny herinandro maro na volana maro.
Ny tetikasa tsirairay dia natao arakaraka ny takian'ny mpanjifa tsirairay. Isaky ny manamboatra ny vokatra amin'ny resaka material sy grammage ary koa ny toerana misy ny sary mifanaraka amin'ny client izahay. Indraindray isika dia manova ny endrika miaraka amin'ny alàlan'ny faneken'ny mpanjifa hahazoana ny vokatra tsara indrindra.
Ny fanaovana pirinty dia azo atao tsy amin'ny fitafiana ihany, fa amin'ny gadget hafa voafantina ihany koa
Fanontana mivantana avy amin'i DTG
Fanontana DTG na "Direct To Garment" dia fomba maoderina ny fanaingoana mivantana ny lamba sy akanjo. Ny teknikan'ny DTG dia ahafahanao mampiditra sary amin'ny lamba landihazo na landihazo miaraka amina elastane / viscose. Namboarina tamin'ny fampiasana mpanonta manokana ny sary. Ny fanaovana pirinty amin'ny teknikan'ny DTG dia ahafahana mamerina ny loko tonga lafatra miaraka amin'ny fiovan'ny loko. Ny fanontana dia azo atao raha tsy mila manomana endrika avy amin'ny singany iray monja.
Ny faharetan'ny fanontana DTG dia miankina amin'ny singa maromaro. Voalohany indrindra, amin'ny maodely sy ny masontsivana amin'ny fitaovana - ny fitaovana vaovao, ny tsara sy ny kalitao tsara. Antony iray hafa mitaona ny faharetana ny karazan-doko ampiasaina, ny lamba anaovana ny fanontana sy ny fahaizan'ny mpiasa.
Ny fanontana DTG, noho ny fanavaozana azy, dia azo ampiasaina na amin'ny famokarana betsaka na amin'ny famokarana amin'ny ampahany iray. Io dia ahafahana manao pirinty fitsapana alohan'ny hanombohana ny andiany iray manontolo. Safidy tsara koa izy io ho an'ny fanomezana manokana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fampakaram-bady na fitsingerenan'ny andro. Ho an'ny orinasa dia vahaolana mety ihany koa izany raha tiantsika ny hanana ny anarany na ny anaram-piasana ao amin'ny akanjony ny mpiasa tsirairay. Toy izany koa ny akanjo, oh: ho an'ny akanjo klioban'ny fanatanjahan-tena, izay misy nomerao maro pirinty amin'ny lobaka na kilaoty fohy.
Fanontana vaovao Rahalahy DTXpro Bulk, izay nanitaranay ny valan-javaboarinay, dia maodely mora miovaova sy tena mahomby. Misaotra an'io, azonao atao ny manitatra ny trano fitahirizanao amina vokatra manokana toa ny T-shirts ho an'ny olona rehetra manana ny anarany, manana ny toerany, kitapo dokam-barotraary na dia kiraro miaraka amin'ny kantonao aza ambaratonga faobe ary koa andiany voafetra.
Manontany tena foana isika matetika fanomezana tsy manam-paharoa ho an'ny olon-tiana amin'ny Krismasy, Paka, Fetin'ny Reny na fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Tianay hisongadina sy hijanona mandritra ny fotoana maharitra ny fanomezanay
raha te-hahatanteraka izany dia ilaina ny mieritreritra fanomezana manokana, matetika ireo izay azo ampiharina dia tsy mampahatsiaro fahatsiarovana mahafinaritra fotsiny, fa koa manompo mandritra ny fotoana ela.
Fanontana DTG tsy mila fanomanana tetikasa izay iray amin'ireo tombony lehibe (toa ny fanontana amin'ny efijery na ny amboradara amin'ny solosaina). Azo atao ny manonta sary na soratra amin'ny sombin-javatra iray ihany, koa ny fanontana sary dia tena izy ary malaza indrindra amin'ny fanomezana, fa zava-dehibe ny hametrahana ilay sary amin'ny vahaolana avo indrindra. Ny fanontana DTG dia nofinidin'ny masoivoho fanaovana dokambarotra satria mampiavaka azy ny vidiny ambany sy ny mateza, izay manandanja indrindra rehefa mikarakara akanjo na lamba hanaovana hetsika isan-karazany na loka ho an'ny fifaninanana.
manasa anao izahay Earlzavatra miaraka amin'ny serivisinay fivarotanaiza no ho faly hamaly ny fanontanianao ary hanao tombana fanamarihana maimaimpoana.
akanjo ba misy ny sary famantarana Allegroakanjo ba misy anaranaamboradain'ny solosainaT-shirt Logolobaka voamarikaakanjo misy sary famantaranaakanjo misy pirintyvolon'ondry misy sary famantaranafanonta-efijeryakanjo manaingomandravaka ny akanjo alaofanamarihana amin'ny akanjofanamarihana akanjo